Ukhilimu we decoys kungenziwa ngezindlela ezahlukene. Kunoma ikuphi, lo mkhiqizo inikeza esiphundu kakhulu, umoya kanye ngokoqobo ancibilike emlonyeni wakho. Kufanele kuqashelwe ukuthi ethulwa semolina ukhilimu ilungele amakhekhe namakhekhe, okuyinto uzilungiselele ngesisekelo a bhisikidi aluhlaza futhi ezithambile. Nokho, umkhiqizo asanda walungisa ingasetshenziswa hhayi nje ngobe kutawutfutfukisa Lubrication wamaqebelengwane, kodwa futhi ukukhonza njengendlela dessert eyigugu futhi simnandi kakhulu, kahle wakufaka nezitsha-ayisikhilimu.
Namuhla, ukunakwa kwakho izokwethulwa ongakhetha eziningana indlela yokwenza ukhilimu "ubisi Lenyoni" of semolina. Kuyaphawuleka ukuthi ekuwulungiseleleni kungase kuthathe amahora angu-nenxenye yesikhathi khulula.
Indlela ukupheka semolina ukhilimu ulamula?
Emelelwa umkhiqizo etholwe umnene kakhulu, kodwa ngesikhathi esifanayo igcina kahle ezakheke emva uthele. Indlela lokhu ukhilimu ulula. Kodwa lokho empeleni waphenduka emoyeni, iyunifomu kanye okumnandi semolina belulekwa ukuba uthele abandayo ephansi fat ubisi, bese kuphela ukupheka. Kodwa izinto zokuqala kuqala.
Ukwakha umkhiqizo olumnandi kangaka uzodinga ukuthenga:
ukuncika ubisi fresh - 2 izinkomishi Imi;
semolina - 4 nezinkezo ezinkulu;
fresh uwoyela ibhotela - 260 g;
isihlabathi Ushukela - 1 inkomishi;
lemon esikhulu - ½ izithelo.
Ngaphambi kokwenza ikhethelo semolina, okusanhlamvu kufanele Thela i isitsha koqweqwe lwawo bese awugcwalise esincane ubisi fresh, uhlanganise kahle futhi ushiye eceleni ingxenye yesine ihora. Phakathi nalesi sikhathi umkhiqizo kuyinto sikhukhumale kancane futhi yiyo yonke izigaxa engadingeki.
Ngemva izinyathelo ezingenhla isisindo semolina kumele agqoke ukushisa low, engeza ubisi ezisele futhi imenze ngamathumba. Ngakho, kubalulekile ukuba ukupheka iphalishi kunalokho obukhulu futhi viscous (ngaphakathi imizuzu 25-30) bese uyisuse ekushiseni kuphole.
Nakuba semolina mass ayaphola phansi, ungaqala ukulungiselela izithako asele. Ngenxa yalesi kubalulekile ukususa in ibhotela kusengaphambili kusukela efrijini, iqhwa elisenyameni ngokuphelele ekamelweni lokushisa abese ngamandla yenza blender kanye ushukela granulated. Futhi e oily emoyeni ingxube edingekayo ukuze abeke lalamula elikhuhluziwe, othathwe izithelo hlangana neengcezu. Kuyinto ngenxa ethulwa isithako semolina ukhilimu kuyoba elimnandi xaxa futhi kuqabula.
Ekuphetheni, nenqwaba amafutha, ushukela kanye uqweqwe kufanele ukungezwa liphalishi selehlile futhi ngokuphelele zonke beat ngosizo blender. Ngenxa yalokho, kufanele ube emoyeni futhi ngokoqobo encibilika emlonyeni wakho ukhilimu. Kufanele ngokushesha isetshenziswa ikhekhe sponge noma kremanki efakwa, bese ifakwa ekamelweni ukupholisa for solidification ephelele.
Kufanele kuqashelwe ukuthi i-athikili olumnandi kangaka icabanga umumo esitebeleni isimo abandayo, futhi ukunambitheka kanye ukungaguquguquki ziyafana efana izitolo "ubisi Lenyoni".
Amnandi emoyeni semolina ukhilimu nobisi olujiyile
Lo mkhiqizo kuyalungiswa ngendlela efanayo kulowo odlule. Kodwa umehluko phakathi kwabo zisuke zisekhona. Cabanga indlela kulungiselelwa lokhu ukhilimu kabanzi.
Cream of semolina kuphekwe kwalokho ubisi olujiyile kuyinto ukunambitheka emnene nomusa ngokwengeziwe. Ngakho umkhiqizo abakwazi kuphela gcoba amakhekhe, kodwa futhi ukuhlobisa ezihlukahlukene amakhekhe.
Ngakho, ukulungiswa emelelwa dessert uzodinga:
ubisi fresh akuyona okuqukethwe eliphezulu kakhulu amafutha - 2 izinkomishi eligcwele;
uwoyela alube fresh - 270 g;
Ubisi olujiyile abilisiwe - embizeni standard;
lemon ikhasi - ½ isithelo (futhi, uma babefisa, asikwazi ukwengezwa).
Step by step ukupheka ukhilimu
Ngaphambi ukushisa ukwelashwa semolina kufanele uwubeke endishini, bese uthele ubisi kancane uhlanganise kahle. Ngemva kwemizuzu engu-15 vzbuhshuyu mass kudingekile ukwengeza asele ubisi umkhiqizo, wafaka izitsha phezu komlilo ukubilisa bese uvula phansi igesi esiphansi. Kuleli zinga, iphalishi kufanele ubilise imizuzu 45, ngokuqhubekayo sibhebhezela ngesipuni (hhayi wokushiswa). ukwelashwa ukushisa isikhathi eside enjalo liyadingeka ukuze pellet semolina kubhidlika ngokugcwele hhayi wazizwa dessert. Okulandelayo, kumele preform asuswe ukushisa kanye emoyeni obandayo.
Nakuba liphalishi epholisa, kungenzeka ukulungiselela ingxenye emoyeni-ayisikhilimu yesibili. Ukuze wenze lokhu, thatha ibhotela incibilikiswa ngokuphelele emazingeni okushisa okuvamile. Ngaphezu kwalokho, kudingeka ukuthi abeke ku isitsha blender futhi yenza ukwakha mass kakhulu ezimhlophe futhi Fluffy. Ngemva kwalokho, umkhiqizo kuyadingeka ukuze wengeze ubisi olujiyile ne usuphinda kuhlangana.
Kufanele kuqashelwe ukuthi onjalo ikhekhe ikhethelo semolina kufanele uzilungiselele kuphela Varenkov. Phela, uma wengeza ubisi evamile olujiyile, umkhiqizo uyoba uketshezi kakhulu futhi akuthathi ifomu sidinga.
Ngemva yesibili ingxenye luphuzi usulungile, ungakwazi ukwengeza ngokuphepha semolina abandayo ne jusi ikhasi (uma uthanda), futhi ngalesosikhathi qhuqha phezulu njengoba kahle usebenzisa ukupheka kulandzelana nekuhlunga tinsita.
Ngenxa yalokhu inqubo, kufanele uthole mass obukhulu alube ephethe ukunambitheka liphinyiselwe ubisi wafingqa.
Njengoba kushiwo ngenhla, semolina ukhilimu ingasetshenziswa njengendlela dessert egcwele, futhi awubeka bhisikidi. Manje sifuna ukwethula wena ukudweba ikhekhe nge ukusetshenziswa kwalo mkhiqizo kanjani. Lokhu kudinga Bhaka ikhekhe zakudala ne ukwengeza nokhokho oyimpuphu bese kuphole kahle, ukusika ohlangothini izingxenye usebenzisa ipuleti njengoba amaphethini, kanye ungqimba obukhulu isetshenziswa ebusweni cream semolina (kufika ku 4-5 cm ubude). ikhekhe ephakeme Kunconywa ngokuphelele amboze frosting ngokwenza kusuka amnyama ushokoledi ibha ne ukwengeza izingcezu ubisi ibhotela spoon. Nokho, kuyinto efiselekayo lokufeza inqubo ngemuva nje mass selupholile. Phela, uma uthele dessert ashisayo, nje "iflothi". Ekupheleni ikhekhe aluhlaza futhi okumnandi okuzenzela "ubisi Lenyoni" Kumele kube khona kuthe ukuphola futhi igcinwe futhi bayafundisa okungenani amahora amathathu.
Marinade ngoba inkukhu eyosiwe - ngesisekelo dinner okumnandi!
Ikhekhe nge plums ku kefir. zokupheka
Ukhastadi ukhilimu luphuzi namakhekhe. Ukhastadi: iresiphi zakudala
Veps - Finno-Ugric abantu abahlala Karelia. ubuzwe Veps
Izidakamizwa "Alikaps". Izibuyekezo kanye Isicelo
Indlela yokutshala amahlumela imali esihlahleni. Indlela ukutshala isihlahla imali
Indlela qinisa isisekelo ubudala yendlu? Indlela yokuqinisa izisekelo zendlu ubudala ngezandla zakhe?